ဖုန်ကြားရှင်သည် P5 City NGP ကတ်ပေါက်ကြားမှုကို ထောက်ခံပြီး အလိုအလျောက် လမ်းလွဲပေးသော အချက်ပြမီးပွိုင့် ဖော်ထုတ်မည် - Pandaily
ဖုန်ကြားရှင်သည် P5 City NGP ကတ်ပေါက်ကြားမှုကို ထောက်ခံပြီး အလိုအလျောက် လမ်းလွဲပေးသော အချက်ပြမီးပွိုင့် ဖော်ထုတ်မည်
Categories: Auto ကိုPandaily ဩဂုတ် 10, 2021 ဩဂုတ် 10, 2021 မှာ Posted
အင်္ဂါနေ့က ဖုန်ကြားရှင်အင်ဂျင်နီယာ တစ်ဦးဟာ သေးငယ်တဲ့ Peng P5 အမျိုးအစား လျှပ်စစ်ကား လမ်းကြောင်းပြလမ်းညွှန်မှု (NGP) စနစ်ကို မြို့တွင်း မောင်းနှင်ရာမှာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုတစ်ခု ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ NGP ကုမ္ပဏီရဲ့ ပထမဆုံးလူသိရှင်ကြား ထိတွေ့မှုဖြစ်ပါတယ်။
စကၠန္႔ ၃၀ စာ ဗီဒီယိုေလးကို Peng P5 က ျပသခဲ့ၿပီး: Voice Assist, Automatic transmission, Recognition, မီးပြိဳင့္ Count Down, Down Downs, Downs, Downship, From From From From Fallout, Auto ဒီ့အပြင် ဖုန်ကြားရှင်ဟာ P5 ဒစ်ဂျစ်တယ်မီတာ အသစ်နဲ့ လက်ရှိသူ့ရဲ့ P7 နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။
ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ P5 ယာဉ်ဟာ မြို့တွင်းလမ်းဆုံ လမ်းဆုံ လမ်းခွမှာ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် ရခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါဟာ Peng P5 ရဲ့ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး XPILOT 3.5 မောင်းနှင်မှုအကူစနစ်ဟာ မြို့တွင်း မောင်းနှင်မှုအထောက်အကူပြု NGP မှာလည်း သူ့ရဲ့လေဆာရေဒါဆင်ဆာကို အဓိကအသုံးချနေတဲ့ မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ လာမည့္ႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ Xiao Peng ကားသည္ OTA မွ တစ္ဆင့္ ၿမိဳ႕ျပင္သို႔ ေမာင္းႏွင္မည္ျဖစ္ၿပီး NGP ကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္မွ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားကို ခုတ္ေမာင္းသြားမည္ျဖစ္ကာ အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမ်ားပင္ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ County လမ္းမႀကီးမ်ားကို ျဖတ္သန္း ေမာင္းႏွင္ရမည္ျဖစ္သည္။
အလိုအလျောက်မောင်းနှင်တဲ့ hardware ပိုင်းမှာဆိုရင် Peng P52လေဆာရေဒါပါရှိတဲ့ ရေဒါပါရှိတဲ့ ရေဒါငါးလုံး၊MSEC wave ရေဒါပါရှိတဲ့ ၁၂ လုံး၊အာထရာဆောင်း sensor ၁၃ လုံး၊HD ကင်မရာနဲ့ 32 sensor plus sensor ပါရှိတဲ့ setting, watch setting, watch radar နဲ့ Senior dule susion စနစ်ပါရှိတဲ့ houching location တွေ ပါရှိတဲ့အတွက် ကားရဲ့အတွင်းခန်းရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဆင့်မြင့်မြင့် deplements လူသြားလူလာမ်ား အတြက္ အလြန္တိုးတက္ေစမည့္ကားမ်ား၊ အ ခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေသးငယ္ေသာ အရာဝတၳဳမ်ားကို ေထာက္လွမ္းႏိုင္စြမ္း အျမင့္ဆံုးစင္တီမီတာအထိ တိက်စြာ တိုင္းတာရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
Little P5 ဟာ Max Power က ၁၅၅ ကီလိုဝပ်၊ Max run က ၃၁၀ နယူတန်မီတာ ဖြစ်ပါတယ်။ သည်ကုမဏီဟာ ဘက်ထရီ အန္တရာယ်ကင်းစေဖို့ အိုဒယ်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ထရီ ရရှိဖို့ စီမံဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
သည်ထုတ်ကုန်အသစ်ဟာ လက်ရှိမှာ NEDC သက်တမ်းသုံးမျိုးခွဲထားပြီး ဖော့စဖိတ်၊ သံဓာတ်နဲ့ လီသီယမ် ဘက်ထရီ သုံးမျိုးဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ ပမာဏ ၅.၉ ကီလိုဝပ်နာရီ ၆၆.၂ ကီလိုဝပ်နာရီနဲ့ ၇၁.၄ ကီလိုဝပ်နာရီအသီးသီးရှိပြီး သက်တမ်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ မိုင်နှုန်းက ၄၆၀ ကီလိုဝပ်နာရီ ၅၅၀ ကီလိုမီတာနဲ့ ၆၀၀ ကီလိုမီတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Peng P5 ဟာ အဓိက Smart မောင်းနှင်ပြီး Cockpit, Cockpit, ပထမဆုံးအနေနဲ့ Xmart OS3.0 စနစ်ကို အခြေခံထားတဲ့ Smart Exchange Class ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင္က Pandaily တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ Peng Xiao P5 ကို စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အခု မော်ဒယ်က ကျစ်လစ်ပြီး အနေအထားမှာ ဆီဒင်ကားတွေရဲ့ ကြိုတင်မှာယူမှုကို ဖွင့်ထားပါတယ်၊ ကြိုရောင်းဈေးက ၁၆ ဒသမ ၂၃ သန်း (၂.၅ သန်းကနေ ၃.၅ သန်း) ကြား ရှိပါတယ်။
Topics: မြင်ကွင်းXiao Peng အသစ်စက်စက် P5 အမျိုးအစား လေဆာရေဒါကို ပြည်တွင်းလျှပ်စစ်ကား ဈေးကွက်အတွင်း ပြိုင်ဆိုင်မှု ပြင်းထန်
BYD ၏ ၇၀, ၀၀၀ စင်ကြယ်သော လျှပ်စစ် ဘတ်စ်ကား သည် အော့ ဖ် လိုင်း ဖြစ်သည်
ဗုဒ္ဓဟူး နေ့တွင် ရှန်ကျန်း အခြေစိုက် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD သည် ၇၀, ၀၀၀ မြောက် လျှပ်စစ် ဘတ်စ်ကား ကို၎င်း၏ Hangzhou စက်ရုံ တွင် ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း ပေါ်သို့ တင်ခဲ့သည်။ ၁၃ မီ တာရှည် သော ဘတ်စ် ကားကို ဆွီဒင် သို့တင်ပို့ မည်ဖြစ်သည်။
BYD နှင့် Xiangyang City တို့သည် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်း အခြေစိုက်စခန်း အသစ် တည်ဆောက်ရန် ပူးပေါင်း ကြသည်
တနင်္လာနေ့တွင် ဟူ ဘေး ပြည်နယ်ရှိ Xiangyang မြူနီစီပယ် အစိုးရ သည်တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု သဘောတူညီချက်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
Changan NEV သည် Round B ရန်ပုံငွေ ယွမ် ၅ ဘီလီယံ နီးပါး ရရှိ ခဲ့သည်
Chongqing Changan New Energy Vehicle Co., Ltd (Changan NEV) က စုစုပေါင်း ယွမ် ၄. ၉ ၇၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၇ ၈၆. ၅ သန်း) အတွက် Round B ရန်ပုံငွေ ပြီးစီး ကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။